Jawbone Up Move: ku xakamee dhammaan dhaqdhaqaaqa jirkaaga for 49,99 | Androidsis
Manuel Ramirez | | Batariga, Aaladaha Android, Qalabka kale
Jawbone wuxuu bilaabayaa Up Move, oo ah qoondeeye shaqsiyeed for 49,99 taas waxay la timaadaa sifooyin gaar ah oo loogu talagalay jirdhiska iyo hurdada. Tira -koobkani wuxuu hoos u dhigayaa masaafada u dhexaysa qiimaha ilaa kan kale oo uu ku bilaabay $ 129 kaas oo loogu magac daray Up24.
Up Move wuxuu la yimaadaa ku dhawaad ​​astaamo isku mid ah oo quantizer-ka ugu sarreeya uu bixiyo, oo u taagan awooddiisa batteriga ee cajiibka ah, tan iyo waxay noqon kartaa ilaa 6 bilood iyada oo aan loo baahnayn in la beddelo baytarigeeda. Up Move waa biyo u adkaysta wuxuuna leeyahay jir aluminium leh clip kaas oo kuu oggolaan doona inaad ku dhejiso wax kasta oo soo -bax ah sida jeebka jarka. Dhammaan aaladda cabbirrada ugu yar oo meel walba kula socon doonta.
1 Laakiin maxaan ugu baahanahay Up Move?
2 Android iyo jirdhiska
3 Kor u app
Laakiin maxaan ugu baahanahay Up Move?
Up Move waa tiro -koobe shaqsiyeed oo oggolaanaysa cabbir dhammaan tallaabooyinkaaga, jimicsigaaga iyo kalooriyadaada maalintii oo dhan, iyadoo la ilaalinayo saacadaha hurdada iyo tayadeeda. Tiraabiyuhu xitaa wuxuu leeyahay saacad moodel ah oo u sheegaysa waqtiga iyada oo loo marayo laba Laydh oo lagu dhisay qaybta muuqata ee saacadda oo muujineysa waqtiga iyo 5 daqiiqo oo u dhexeysa. Waxay leedahay dareeme Bluetooth isku dhafan oo siiya macluumaadka aaladaha ilaa barnaamijka Up, kaas oo laga heli karo Android iyo iOS labadaba.
Waxa kale oo ka mid ah astaamaha tababarka iyada oo loo marayo isla app. Hawlgalkan wuxuu oggol yahay la socodka dhaqdhaqaaqa oo soo jeedi talooyin ku salaysan xoojinta leyliskaaga maalinlaha ah.
Sare Usoco waxaa lagu heli doonaa shan midab, oo waxaad durba ka sii kaydsan kartaa mareegaha Jawbone, iyadoo la wajahayo 19ka Nofembar in cutubyada ugu horreeya la bilaabi doono in la suuq geeyo. Qalab ku habboon adeegsadayaasha ka helay la socodka dhammaan dhaqdhaqaaqooda jidheed ee maalinlaha ah wax muhiim u ah maalinba maalinta ka dambaysa.
Android iyo jirdhiska
Mid ka mid ah aaladaha saamaynta weyn ku leh dadka isticmaala caadiga ah waa jijimooyin caqli badan. Kuwaas oo kale waxaa loo adeegsadaa hawlo badan marka laga reebo noqoshada waqtigan xaadirka ah Google wuxuu bilaabay Fit, barnaamijkaaga si loola socdo dhammaan noocyada jimicsiga jirka. Markaa muuqaalka Up Move, aalad xitaa ka yar jijin oo meel kasta la dhigi karo iyada oo aan la keenin wax raaxo -darro ah, ayaa laga yaabaa inay xitaa dareen dheeraad ah siiso aaladda noocan ah ee imaanaysa inay isku xirto waxa Android tahay.
Haddii jijimooyin caqli badan ay hore u ahaayeen ka hor iyo ka dib dhammaan noocyada kala duwan ee barnaamijyada jimicsiga jirka, imaatinka aaladdan xiisaha leh oo xiisaha leh, tayo badan u keeni doonta qaybtan jirdhiska iyo in la xakameeyo caafimaadka jidhkeena.
Kor u app
Iyada oo leh barnaamijka UP dhammaan xogta Up Move si toos ah ayaa loo waafajin doonaa barnaamijka iyo barnaamijka laftiisa waxaad ka duubi kartaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada maalinlaha ah, hurdada, cuntada iyo cabbitaanka. Waxa suurtogal noqon doonta in la ogaado inta wakhti ee hawl kasta ku jirta, labada tallaabo ee la qaaday, masaafada ama kalooriyada la cunay. Waxaas oo dhan waxaa lagu bixin doonaa barnaamijka iyadoo leh sawirro ku habboon oo soo bandhigi doona macluumaadka sida ugu wanaagsan.
Un daqiiqad gaar ah si loo xakameeyo jirka qofka leh barnaamijkan iyo aaladda xiisaha leh ee loo yaqaan Up Move. Caafimaadka marka hore, tanina waa asaaska Jawbone Up Move.
UP - Wuxuu u baahan yahay UP / UP24 / UP dhaqaaq
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » Jawbone wuxuu bilaabayaa Up Move, qiyaas shaqsi ahaaneed € 49,99 iyo 6 bilood oo batari ah
Barnaamijka shukaansiga Happn ayaa yimid Spain
Barnaamijyada Cajiibka ah ee Android: Maanta XMTV Player Android Media Player oo Dhamaan Akhriso